तपाईलाई थाहा छ कस्को तस्वीर बढी हेरिन्छ ? यस्तो रहेछ महिलाकै तस्वीर बढी हेरिनुको कारण | Rajmarga
तपाईलाई थाहा छ कस्को तस्वीर बढी हेरिन्छ ? यस्तो रहेछ महिलाकै तस्वीर बढी हेरिनुको कारण
पुरुष र महिलामा गरिएको एउटा अध्ययनले पुरुषको तुलनामा अधिकांश र लामो समयसम्म महिलाको तस्वीर हेरिने गरेको खुलासा भएको छ।
पुरुष र महिलाको मिल्दोजुल्दो समूहमा पनि महिलाको तस्वीर अधिक हेरिने गर्दछ । सिएनसिनाटी विश्वविद्यालयका मनोविज्ञान कार्यक्रमका शोध छात्रा मेरी जेन अमानले भनिन्–हामीलाई थाहा भयो कि महिलाको तस्वीर अधिक हेरिने गर्दछ । महिलाको तस्वीरलाई सबैभन्दा पहिला र सबैभन्दा अन्त्यमा पनि राखेर हेरियो । सबैभन्दा बढी अवधिसम्म महिलाको तस्वीरलाई नै हेरेको पाइयो । पुरुष र महिला दुवै दर्शकको समान अवस्था थियो ।
अमानका अनुसार यो अध्ययनबाट वस्तु सिद्धान्त थाहा हुन्छ कि महिलाहरुलाई अक्सर आफ्नो शारीरिक संरचनाको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ ।यसलाई अक्सर कामुकतासँग पनि जोडेर हेरिन्छ । यहाँसम्म कि महिलाहरुको मात्र शारीरिक अंग मात्रै हेरिन्छ । यस कारणबाट कतिपय अवस्थामा नकारात्मक परिणाम पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि छोटो अवधिको प्रभावमा आत्मविश्वासमा गिरावट र मष्तिस्कको सक्रियाताको कमी पनि शामेल छ। वास्तवमा महिलाहरुका लागि लामो अवधिको प्रभाव बढी मुश्किल छ ।
अमानका अनुसार महिलाहरु स्वयमको शारीरिक संरचनाको सन्दर्भमा मूल्याङकन सुरु गर्दछन् । यस अध्ययनमा संलग्नहरुलाई दुई समूह बनाइएको थियो । पहिलो समूहमा १ सय कलेज छात्रछात्रा थिए । यसमा ५० महिला र ५० पुरुष छात्र थिए । उनीहरुलाई सेतो पृष्ठभूमिअगाडि राखेर चित्रशैलीमा तस्वीर खिचियो ।
दोस्रो सामूहमा ७६ जना छात्रछात्रा थिए । उनीहरुले दृष्यमा उत्तेजनासँग सम्बन्धित जाँचमाथि मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया दिनु थियो । यस सन्दर्भमा उनीहरुलाई मानिस, कला, प्राकृतिक दृष्य, जनावर र कार्टुनको तस्वीर देखाइयो । त्यसपछि दर्शक समूहलाई तस्वीर हेर्नका लागि कम्प्युटर मनिटरअगाडि बसाइयो । तस्वीर हेर्दै गर्दा शोधमा संलग्न उम्मेदवारको आँखाको गतिविधिलाई मापन र रेकर्ड गर्नका लागि नेत्र मापक डिभाइसको प्रयोग गरिएको थियो ।
यस विषयमा सहभागीहरुलाई कुनै जानकारी गराइएको थिएन । यो शोध रिपोर्ट मनोविज्ञानसम्बन्धी पत्रिका फ्रन्टियरमा प्रकाशित छ । एजेन्सी
Previous post: यी तीन विषयमा अड्कियो वाम एकता, अब के होला ?
Next post: हास्यकलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठलाइ पत्नीशोक